မောင်သုည၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
ဘလော့များ (20)ဆွေးနွေးချက်များ (8)အဖွဲ့များဓါတ်ပုံများPhoto Albumsဗွီဒီယိုများ မောင်သုည's Likes မောင်သုည's ၏မိတ်ဆွေများ
အားလုံးကြည့်ရန်... မောင်သုည's Discussions
လူ့ ဘ၀သေပြီးနောက်တဖန်လူ့ ဘ၀ပြန်ရရင်ရှုံးသလားမြတ်သလား(အဖြေ )
Started this discussion. Last reply by မိုးထက်ကျော် Dec 25, 2012. 17 Replies
အခုလူ့ ဘ၀သေပြီးနောက်တဖန်လူ့ ဘ၀ပြန်ရရင်ရှုံးသလားမြတ်သလားအခုလူ့ ဘ၀သေပြီးနောက်တဖန်လူ့ဘ၀ရတယ်ဆိုပါတော့ ကိုယ်ဘယ်လိုမိဘမျိုးရဲ့ ဝမ်းထဲမှာလူဖြစ်မှာလဲ ဆံတိုဂုတ်ဝဲမော်ဒယ်ဂဲ နဲ့ ဘိန်းဖြူအရက်စွဲနေတဲ့ မိဘ ၂…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........ဘလော့အမျိုးအစား(ဘာသာရေး) လူ့ဘ၀ သေပြီး နောက်ဘ၀ မှာလူ့ဘ၀ပြန်ရရင် ရှုံးသလားမြတ်သလား ?
Started this discussion. Last reply by saw htwe Mar 8. 19 Replies
အခု လူ့ဘ၀ သေပြီး နောက်ဘ၀ မှာလူ့ဘ၀ပြန်ရရင် ရှုံးသလားမြတ်သလား ?ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆောင်းပါတပုဒ်ရေးဘို့စိတ်ကူးပါတယ် ဒါပေမဲ့ တချို့ အကြောင်းအရာတွေဟာ ကိုယ်တိုင်းတွေးကြည့်ပြီး…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........ဘလော့အမျိုးအစား(ဗုဒ္ဓစာပေ, စာပေ) သောတာပန်တည်ရင်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ ရှင်းလင်းချက်
Started this discussion. Last reply by မောင်သုည Mar 20. 29 Replies
သောတာပန်တည်ရင်ဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ မောင်ကျော်ဇင်အောင်၏အမေးအားရှင်းလင်းသွားရန် မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏တ တရားများမှ ကောက်နုတ်တင်ပြလိုက်ပါတယ်သောတာပန်အင်္ဂါ ( ၇ ) ပါးသောတာပန်ဖြစ်တယ်ဆိုတာ…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........ဘလော့အမျိုးအစား(ဗုဒ္ဓစာပေ) သင်ဘယ်နေ့သေမလဲဆိုတာ ကြိုသိရင်ဘာလုပ်မလဲ
Started this discussion. Last reply by ကျော်ကို Apr 19, 2012.3Replies
သင်ဘယ်နေ့သေမလဲဆိုတာ တွက်ကြည့်လိုက်ရအောင် ဆို တဲ့ Post တခု ကို ท အညာသား က ရေးသားတင်ပြထားပါတယ် ( ဇွန် 23, 2011 ) အောက်ကလင့်လေးကနေသွားလိုက်.....ပါတဲ့…ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........ဘလော့အမျိုးအစား(စာပေ) အားလုံးကြည့်ရန်...
မောင်သုည commented on မောင်သုည's blog post '၀မ်းစာ'"အခုကိုပြင်ပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်"တနင်္လာနေ့Thaung Tan liked မောင်သုည's blog post '၀မ်းစာ'Sundayမြူနှင်းမှုံ liked မောင်သုည's blog post '၀မ်းစာ'Sundaydimplemit commented on မောင်သုည's blog post '၀မ်းစာ'"ဦးရေ ကျနော် အဲဒီအမှားလေး ဘလော့မှာ ပြင်ဆင်လိုက်ပါတယ်။ ဖတ်ကြည့်ပေးပါဦး။ ဟုတ်မဟုတ်။"Sundayမောင်သုည commented on မောင်သုည's blog post '၀မ်းစာ'"အမှားပြင်ချက် ထမီလေးတစ်ထည်အကြောင်းပြောသူမှာ နုနုရည်အင်းဝဖြစ်ပါသည် ( မြသွေးနီဟုမှားယွင်းဖေါ်ပြမိပါသည် )"Sundayhla moe 24 commented on မောင်သုည's blog post '၀မ်းစာ'"နှောင်အခါ အဲ့လိုမျိုးကြုံခဲ့ရင် ကျွန်တော်ကိုဆက်သွယ်ပေးပါ.တတ်နိုင်သလောက် ကုသိုလ်ပါဝင်ချင်ပါတယ်"Sundayhla moe 24 commented on မောင်သုည's blog post '၀မ်းစာ'"လေးနက်စွာ သာဓုခေါပါ၏...သာဓု သာဓု သာဓု"Sundayမောင်သုည postedablog post၀မ်းစာဝမ်းစာ ဆရာတော်ဦိးဇောတိက(မဟာမြိုင်တောရဆရာတော်…See MoreSunday 5
မြူနှင်းမှုံ liked မောင်သုည's blog post 'ဘယ် ကံ က စပါသလဲ'Sundayဖိုးကံထူး commented on မောင်သုည's blog post 'ဘယ် ကံ က စပါသလဲ'"ဟုတ်ပါတယ် ခြေထောက်ကခံစားလို့မရတာ မနောကခံစားတာကိုညဏ်နဲ့ကြည့်တာလား မနောကစိတ်၂ခုပြိုင်မပေါ်ကောင်းဘူးဆိုတာသိတယ် ခြေထောက်နာတယ်လို့ခေါ်လိုက်တယ် မနောကနာတယ်လိုသိလိုက်တယ်ဖြစ်တာကိုသိတယ် နာတယ်ဆိုတာကိုသိတာနဲ့ခံစာတဲ့စိတ်မပျောက်ပါဘူး နာတယ်နာတယ်လို့ပဲထင်နေမှာပဲ…"Saturdayမောင်သုည commented on မောင်သုည's blog post 'ဘယ် ကံ က စပါသလဲ'"ဥပမာ ထိုင်နေရင်း ခြေထောက်က နာလာတယ် - သိတာက မနောက မှသိတာ နာတယ်ဆိုတာကို ခြောကထောက်က ခံစားလို့မှမရတာ မနောက ဘဲခံစားတာပါ - သိတာလဲမနောကဘဲ - မနောက စိတ်နှစ်ပြိုင် ပေါ်လို့မရဘူး ဒါကြောင့် နာတယ်ဆိုတာကို သိလိုက်တာနဲ့ နာတယ်ဆိုတဲ့ ခံစာတဲံစိတ်ပျောက်သွားရတယ် ( ဒါ…"May 18ဖိုးကံထူး commented on မောင်သုည's blog post 'ဘယ် ကံ က စပါသလဲ'"ဘယ်အရာကိုဆွေးနွေးရမှန်းကိုမသိတာယားတဲ့ခန္ဓာပျက်ပြိး သိတဲ့ညဏ်ရောက်တာနဲ့ တပြိုင်နက် ယာတဲ့စိတ်ပျောက်ပါတယ် စကားအရပြောတာပါ ညဏ်လှည့်တာနဲ့ယားတဲ့စိတ်ပျက်သွားတာတွေ့မှာပါနားထားတရားအ၇ပြောကြည့်တာပါမှားရင်လဲပြင်ပေးပါ မနောကစလာတာတော့မှန်တယ် အကိုသုည"May 18Thaung Tan liked မောင်သုည's blog post 'ဘယ် ကံ က စပါသလဲ'May 18ကိုမင်းနိုင် commented on မောင်သုည's blog post 'ဘယ် ကံ က စပါသလဲ'"သာဓုဗျာ သာဓု သာဓု"May 17မောင်သုည leftacomment for မောင်သုည"အလွန်ကောင်းပါသည်၊သင့်လျှော်သလိုပြန်လည်ပြုပြင်လိုက်တာကောင်းသွားပါတယ်"May 17လှိုင်ကျော်ထွေး liked မောင်သုည's blog post 'ဘယ် ကံ က စပါသလဲ'May 17 More... RSS
ဒီဘလော့ကို May 19, 2013 တွင်2:00pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။5Comments
ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... ဘယ် ကံ က စပါသလဲ
ဒီဘလော့ကို May 17, 2013 တွင်2:30pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။4Comments
ကံ ၃ ပါး ဘယ် ကစပါသလဲ - ကာယကံ - ၀စီကံ - မနောကံလား
မနောကံ - ၀စီကံ - ကာယကံလား ဦးနှောက်ကံ - ဆိုတာကောလို့ရှိလို့လားအဲဒါလေးကို သေသေချာချာစဉ်းစားကြည့်စေချင်ပါတယ်သင်တစ်ခုခု နှုတ်နဲ့ ပြောဘို့ တစ်ခုခု ကိုယ်နဲ့လုပ်ဘို့ အရင်ဆုံးမနောကစေ့ဆော်ပေးလိုက်တာပါ -ဒီလိုပြောလိုက်ပါလား - ဒီလိုလုပ်လိုက်ပါလား - မနောက စေ့ဆော်ပေးလိုက်တာပါ။မနောဆိုတာ စိတ်ဘဲ နမ်ခန္ဓာ ၄ ပါးထဲမှာ၁ - ၀ိညာဏက္ခခန္ဒာ-သိမှုအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ခန္ဓာ၂ - သညာက္ခခန္ဓာ- မှတ်သားမှုအလုပ်ကိုလုပ်တဲ့ခန္ဓာ၃ -… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... အသေလှတဲ့သူ
ဒီဘလော့ကို March 25, 2013 တွင်2:44pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment
ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... ၀ဲသြဂထဲချာချာ -လည်
ဒီဘလော့ကို March 5, 2013 တွင်2:09pm —ရေးသားခဲ့ပါသည်။ 1 Comment
( အစစ်အမှန်သဘောတရားဆိုတာ )အစစ်အမှန်သဘောတရားဆိုတာ-အတုအယောင်အပြောမှားတွေရဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပေါ့… ဆက်လက်ဖတ်ရူရန်......... ဒီနေရာမှ ဗုဒ္ဓစာပေများတင်ရန်...
အားလုံးကြည့်ရန်... Comment Wall (14 comments)
9:14pm အချိန်May 17, 2013, တွင်မောင်သုည မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ အလွန်ကောင်းပါသည်၊သင့်လျှော်သလိုပြန်လည်ပြုပြင်လိုက်တာကောင်းသွားပါတယ် 7:17pm အချိန်May 17, 2013, တွင်လှိုင်ကျော်ထွေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ လေးစားရပါသော ဓမ္မအဆွေတော် အစ်ကိုသုညခင်ဗျာ...။ မိတ်ဆွေ တင်သွင်းသည့် အသဲကွဲ ၀ိပဿနာ ဘလော့ကို သင့်တော်သလိုပြင်ဆင်၍ ခွင့်ပြုမျှဝေပေးလိုက်ပါသည်။ ခွင့်မတောင်းပဲ ဦးစွာပြင်ဆင်တည်းဖြတ်မိခြင်း အတွက် နားလည်ပေးပါရန် လေးစားစွာမေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ 12:19am အချိန်March 30, 2013, တွင်dimplemit မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
Friends18.com Happy Birthday Scraps 12:40am အချိန်February 12, 2013, တွင်dimplemit မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ အလှူဖိတ်စာလေးလာပို့ပါတယ်။ http://buddhismworld.ning.com/profiles/blogs/6371237:BlogPost:293069 1:57pm အချိန်January 7, 2013, တွင်ကိုညီညီတင် မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ လေးစားခင်မင်ရသော ဓမ္မမိတ်ဆွေ ဆရာ မောင်သုည ခင်ဗျား.. (၆-၁-၂၀၁၂)နေ့စွဲ ဖြင့် ဆရာ ဆွေးနွေးခဲ့သော..သီချင်းများကပြောသော မြန်မာ့လွတ်လပ်ရေးမိုင်း.. အမည်ရ ဆွေးနွေးခန်းမှာ ကောင်းမွန်လှပါသော်လည်း..
ဗုဒ္ဓဓမ္မ များကိုသာ ဓမ္မဒါနပြုနေသော ဗူဒ္ဓကမ္ဘာဆိုဒ်၏ မူ နှင့် ကိုက်ညီမှုမရှိပ်ါကြောင်း နှင့်
အခြား လူမှုဝက်ဆိုဒ်များနှင့်သာ သင့်တော်မည်ဟုယူဆမိပါကြောင်းလေးစားစွာ
http://buddhismworld.ning.com/group/recital 6:51pm အချိန်August 26, 2012, တွင်နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ အဆင်ပြေသွားပြိးလား ကိုသုည ဘလော့သစ်တွေထဲမှာတော့ ကိုသုညဘလော့မတွေ့မိဘူး ဆွေးနွေးချက်တခုတော့ တနေ့က တွေ့လို့ ဝေတောင်ပေးထားတယ်
အစစအဆင်ပြေပါစေ 4:21am အချိန်April 19, 2012, တွင်နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ အနီ စာပို့ထားပါတယ်..နော်.. 6:57pm အချိန်April 18, 2012, တွင်လင်းကိုကို မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ သင်သည်...
သင်သည်........... 3:36am အချိန်April 11, 2012, တွင်နီစံ (အနီ) မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ကိုသုည မဂ်လာပါ ဘလော့အတွက် mediafire နဲ့ စမ်းကြည့်လိုလဲ ၇နိုင်မလားလို့
လိပ်စာက www.mediafire.com ပါ
အဆင်ပြေပါစေ 9:27pm အချိန်March 30, 2012, တွင်ကောင်းမြတ်မင်း မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။ ပျော်ရွှင်ဖွယ် မွေးနေ့လေး ဖြစ်ပါစေခင်ဗျာ.....မွေးနေ့ဆုတောင်းနောက်ကြခဲ့ရင်တောင်းပန်ပါတယ်.. ယနေ့မှစပြီးနှစ်ပေါင်းများစွားတိုင် (သာသနာအကျိုး၊လူမျိုးအကျိုး၊ကိုယ်ပိုင်ဘ၀အကျိုး)များကိုကိုသယ်ပိုးနိုင်ပါစေ။
Top News · Everything လှိုင်ကျော်ထွေး posted blog postsခန္တီ နဲ့ ဥပေက္ခာ ဘာများထူးခြားသလဲဒါနနဲ့ စာဂဟာ အတူတူပဲလော၊ ဒါနနဲ့ ပရိစ္စာဂ ဘာထူးသလဲ11 minutes agoCicada shared ucandima's blog post on Facebookပျော်ရာမှာမနေတော်ရာမှနေရမယ်37 minutes agoCicada shared ucandima's blog post on Facebookပျော်ရာမှာမနေတော်ရာမှနေရမယ်38 minutes agoCicada shared ucandima's blog post on Facebookပျော်ရာမှာမနေတော်ရာမှနေရမယ်41 minutes agoCicada shared ucandima's blog post on Facebookပျော်ရာမှာမနေတော်ရာမှနေရမယ်42 minutes agoCicada shared ucandima's blog post on Facebookပျော်ရာမှာမနေတော်ရာမှနေရမယ်42 minutes agomun mun aung liked မူကြိုဆရာ's blog post 'မဟာသမယသုတ် (မြန်မာပြန်)'2 hours agoကလေးတို.ဆရာမ and San Min Htun are now friends2 hours agoအရှင်ဣန္ဒာသက္က postedastatus"ဓမ္မမိတ်ဆွေများ အားလုံး ကိုယ်ရော စိတ်ပါ ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေ.."3 hours ago 0
capt, kyaw hsaung liked thein wai's blog post 'ပြုပြင်စရာတွေ ပြုပြင်ကြပါ။'3 hours agodimplemit leftacomment for htunhlaaung"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့်…"4 hours agodimplemit leftacomment for ဗုဒ္ဓဟောကြား မြတ်တရား"ဓမ္မမိတ်ဆွေ၏ ဤနေ့၌ ကျရောက်သောမွေးနေ့မှသည် နောင်သံသရာဆုံးထိတိုင်
ကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာငြိမ်းအေးစွာဖြင့်…"4 hours ago More... RSS